कमाएको पैसा चीन लगेको छैन, नेपालमा अझै लगानी गर्छु
सुशील भट्टराई काठमाडौं - बुधबार, साउन १४, २०७७
उत्तरको विशाल छिमेकी चीनबाट व्यवसाय गर्न नेपाल आएका वाङ झुजुनले दुई दशकभन्दा बढी अवधि यहीँ बिताइसकेका छन्। सुरुवाती समयमा नेपालमा लगानी गर्दा घाटाको व्यापार भए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि आकर्षक आम्दानीमात्र नभई सयौं नेपालीलाई रोजगारी दिन वाङ सफल छन्। एसआर ग्रुपका अध्यक्ष वाङले अहिले सनराइज फर्निचर प्रालि नाफामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। सुरुमा ३ करोड लगानी गरेका वाङले सनराइज फर्निचरमा लगानी थपेर २५ करोड पुर्‍याइसकेका छन्। सनराइजको वार्षिक आम्दानी २० करोडहाराहारी पुगिसकेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा चिनियाँ लगानीको अवस्था, रोजगारी सिर्जना, द्विपक्षीय सम्बन्ध, लगानीका अवसरलगायत विषयमा एसआर ग्रुपका अध्यक्ष वाङसँग आयोमेलका सुशील भट्टराईले गरेको कुराकानी :
चीनबाट आएर नेपालमा व्यापार गर्न थालेको कति अवधि भयो?
म २२ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गरेर बसेको छु। नेपाल आउनुभन्दा अगाडि म खासामा कपडाको व्यापार गर्थें। नेपालमा कपडा पठाउँथे। त्यसबेला केही नेपालीसँग चिनजान भएपछि नेपालमा फर्निचर व्यवसायमा हात हालेँ। फर्निचर व्यवसाय गर्न थालेको चाहिँ १२ वर्षजति भयो।
नेपाल आएर व्यापार गर्दै सयौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो?
पहिलो मेरो व्यवसाय फर्निचर होइन, कपडाको व्यापार गर्थें। त्यही समयमा चीनबाट फर्निचर नेपाल आयात भएको देखेँ। त्यसपछि मेरो मनमा के आयो भने चिनियाँ प्रविधिबाट नेपालमा फर्निचर उद्योग खोल्दा धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालमा हातैले फर्निचर सामान बनाएको देखेँ। त्यसपछि केही नेपाली साथाीसँग मिलेर फर्निचर व्यवसायमा हात हालेँ र अहिले यहाँ आइपुगेको छु।
नेपाली कामदार, साझेदारको व्यवहार कस्तो छ र चिनियाँ व्यवसायीप्रति नेपालको सरकार र स्थानीय प्रशासनको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ?
चिनियाँ प्रविधिबाट सुरुमा काम गर्न गाह्रो भयो। सुरुवातमा नेपाली कामदार तालिमप्राप्त नभएका कारण काममा समस्या भयो तर हामीले तालिम दिलाउँदै गयौं र राम्रो हुँदै गयो। नेपाल सरकारबाट पनि हामीलाई राम्रै व्यवहार भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनको पनि सहयोग पाइरहेका छौं। समग्रमा नेपाल र नेपालीबाट असाध्यै राम्रो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक कोरोना महामारीका कारण ‘लकडाउन’ भयो र व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुनपुग्यो। लकडाउन अवधिमा कस्तो समस्या भोग्नुभयो?
कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी भएकाले सबै क्षेत्र प्रभावित भयो। व्यवसायमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। नेपालको हाम्रो फर्निचर व्यवसायका कामदारको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। हामीले घर जान चाहनेलाई जाने व्यवस्था गरेका थियौं र कारखानामै बस्न चाहनेलाई खाने र बस्ने दुवै व्यवस्था गरेका थियौं। हामी यसैमा खुसी भयौं कि हाम्रा कुनै पनि कामदार कोरोना संक्रमित भएनन् र सबै अहिले आरामसँग काम गरिरहेका छन्।
नेपालले औपचारिक रूपमा लकडाउन खुलेको घोषणा गरिसकेको छ। अब व्यापार कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?
झन्डै सय दिन लकडाउन भयो। अब भर्खरै बजार खुल्थ थालेको छ। हामी पनि त्यसैगरी हाम्रो टिमलाई उत्पादन बढाउँदै बजारीकरणमा लाग्न भनिसकेका छौं। हाम्रा एजेन्ट कम्पनीहरूलाई पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न अगाडि बढाइसकेका छौं। अब नेपालीहरूको महान चाड दसैं र तिहार नजिकै आइसक्यो। हामी दसैं–तिहार लक्ष्य गरेर नयाँ स्किम र नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौं। यसमा हामीसँग आबद्ध सबैको उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ।
चिनियाँ सामानको गुणस्तरमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। चिनियाँ सामान बलियो हुँदैन, आज किन्यो भोलि नै बिग्रिन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ। के चिनियाँ सामान सबै त्यस्तै हुन्छन्?
हो, तपाईंले भनेजस्तै चिनियाँ सामान न्यून गुणस्तरका हुन्छन् भन्ने धारणा नेपालमा छ। तर, सबै सामान त्यस्ता हुँदैनन्। हाम्रा फर्निचरका सामान सबै यहीँ उत्पादन हुने गर्छन्। नेपाली शिशौका काठबाट बन्छन्। नेपाली कामदारले नै बनाउँछन्। हाम्रा सामानमा सानोतिनो समस्या आए तुरुन्तै मर्मत गरिदिन्छौं र ठूलो समस्या आए सामान नै नयाँ उपलब्ध गराइदिन्छौं। हाम्रा सामान उच्च गुणस्तरका भएका कारण हाम्रा सामान सर्वसाधारणदेखि मध्यम वर्ग, ठूला प्रतिष्ठान, कर्पोरेट कार्यालयहरूले धेरै नै खरिद गर्ने गर्छन्।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरेर कर तिर्दै लामो समय व्यापार–व्यवसाय गर्ने विदेशीलाई सरकारले मानार्थ नागरिकता दिने गर्छ। तपाईंलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता दिए बाँकी जीवन यहीँ बिताउनुहुन्छ?
नेपाल सरकारको यो राम्रो पक्ष हो। विदेशी आएर यहाँ काम गर्नेलाई नेपाल सरकारले राम्रो व्यवहार गरिरहेको छ। तर, नेपाली नागरिकता लिएरै म नेपालमै बाँकी जीवन बिताउने भन्ने योजना चाहिँ बनाइसकेको छैन।
हालसम्म तपाईंले नेपालमा कति परिमाणबराबरको लगानी गर्नुभयो र अब थप्ने कुनै योजना छ?
व्यापारको दौरान नेपालमा दुई दशकभन्दा बढी बसिसकेँ र लगानी पनि त्यसैगरी गरिरहेको छु। अधिकांश लगानी र कमाएको आम्दानी नेपालकै कारखानामा पुनः लगानी गरिरहेको छु। कमाएको पैसा चीन लगेको छैन। आगामी दिनमा पनि अन्य चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर थप लगानी गर्दै व्यापार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु।
फर्निचरबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
फर्निचरबाहेक अन्य व्यवसाय गर्ने योजना छ। अब म फ्याँकिएका प्लास्टिक बटुलेर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हुने गर्ने योजनाको तयारीमा छु। यसबाट सडकमा फ्याँकिएका प्लास्टिक तह लाग्छन् भने त्यसबाट पेट्रोल र डिजेल उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ। यसमा चारजना चिनियाँ इन्जिनियर संलग्न छन्। यसका लागि नेपाली साझेदारहरूसँग पनि अन्तिम चरणको कुराकानी भइरहेको छ। कानुनी काम लगभग पूरा भइसकेको छ।
प्लास्टिकबाट पेट्रोल–डिजेल उत्पादन गर्ने परियोजनाबारे अलि विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न!
नेपालमा जताततै सडकमा प्लास्टिक फालिएको पाइन्छ। यसले वातावरणमा पनि नराम्रो असर गरिरहेको छ। प्लास्टिक बटुल्नेले पनि दुई–चार रुपैयाँ किलोमै बेचेर देश बाहिर पठाउने गरेको पाइन्छ। यस्तो देखेपछि म र मेरा साथीहरूलाई प्लास्टिक प्रशोधन गरेर पेट्रोल–डिजेल उत्पादन गर्ने योजना फुरेको हो। मेरा केही इन्जिनियर साथीहरू यो परियोजनालाई मूर्तरूप दिन चीनबाट आउने तयारीमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनासाथ उनीहरू आउनेछन्। यो परियोजनामा हामी सुरुवातमा ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्छौं। यसबाट दैनिक ३० टन प्लास्टिक संकलन गरी १५ टन पेट्रोल–डिजेल उत्पादन गर्ने योजना छ। यस्तो उत्पादन हाल प्रयोगमा आइरहेको युरो मापदण्डकै पेट्रोल–डिजेल सरह हुनेछ।
नेपाल एक उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य भएका कारण यहाँ अधिकांश चिनियाँ व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन्। तपाईंको पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच छ?
मैले फर्निचरमा लगानी गरेँ। अरूले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। यसमा पनि हामीबीच सहकार्य भएको झैं छ। हामीले उत्पादन गरेका फर्निचर सामग्री पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टमा खपत भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले म पर्यटन क्षेत्रमै लगानी गर्ने भन्ने सोचाइमा भने छैन।
कोरोनाअघि र पछि नेपालमा व्यवसाय गर्न आउने चिनियाँको उतारचढाव कस्तो छ?
अहिले सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्‌यो। अब कोरोना कहर कम हुँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू हुन्छ र त्यसपछि लगानी गर्न इच्छुक चिनियाँ व्यवसायी नेपालमा अझ धेरै संख्यामा बढ्ने विश्वास छ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी कति परिमाणमा भएको होला, कुनै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ?
होटल र ट्राभल क्षेत्रमा कति चिनियाँ लगानी भएको छ भन्ने मेरो अनुमान बाहिरको कुरा भयो। तर, हामी केही साथीहरूको समूहले भने हालसम्म नेपालमा करिब २ अर्ब रुपैयाँहाराहारी लगानी गरेका छौं।
दुवै देशमा व्यापार गरिरहनुभएकाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध असाध्यै पुरानो र सौहाद्र्रपूर्ण रहेको छ। अहिले पनि नेपाल र चीन सरकारको मात्र नभएर दुवै देशका जनताको सम्बन्ध पनि त्यति नै राम्रो छ। दुवै देशका नागरिकबीच एकदम भाइचारायुक्त सम्बन्ध छ। चिनियाँले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालीले चिनियाँलाई हेर्ने दृष्टिको असाध्यै राम्रो पाएको छु। सरकार–सरकार र नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध असाध्यै बलियो र समधुर रहेको पाएको छु।
नेपालसँग दुई विशाल छिमेकी छन्। एकातिर भारत र अर्कातिर चीन। आवागमनका हिसाबले भारत सहज भए पनि चीन अलि अप्ठेरो मानिन्छ। यो सन्दर्भमा नेपालले चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाउन के गर्नुपर्ला?
सम्बन्धको हिसाबमा नेपालले चीन र भारत दुवैतर्फ बराबरको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। चीनले मित्रता र भाइचाराको हिसाबले नेपाललाई अलि बढी नै महत्व दिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि दिने विश्वास छ। भौगोलिक हिसाबले भारतभन्दा चीन आवतजावतले अलि अप्ठेरो चाहिँ पक्कै हो तर अहिले चीनको रणनीतिअनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ जस्ता योजनामा नेपाल परेको छ। मेरो विचारमा सम्बन्ध सुमधुर छ भने भौगोलिक हिसाबले असहज भएर केही फरक पर्दैन।
नेपालमा व्यापार गर्न चिनियाँ व्यवसायीलाई भाषाले कत्तिको समस्या पारेको छ?
अहिलेको समयमा भाषा नै समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले पनि अंग्रेजी सिकेका छौं। अलिअलि नेपाली पनि बोल्न सक्छौं। अनि नेपालीले पनि विस्तारै चिनियाँ भाषा सिकिरहनुभएको छ, दोभाषेको काम गर्न सक्ने हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसकारण अब चिनियाँ व्यापारीलाई नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गर्न भाषाकै कारण समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन। हो, विगतमा भने भाषाले अलि समस्या पर्ने गथ्र्यो।
तपाईं र तपाईंको समूहले अहिले नेपालमा कतिलाई रोजगारी दिनुभएको छ?
हाम्रो समूहले नेपालमा लगानी गरेपछि हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ। हाम्रो समूहमा कूल रोजगारीको ९५ प्रतिशत नेपाली कामदार हुने गरेका छन्। पाँच प्रतिशतमात्र चिनियाँ कामदार हुने गर्छन्।